SM-G570Y | SM-G570YWDA2DX | Samsung MM
ယခု ဆိုကျ တှငျ Cookie ကိုအသုံးပွုထားပါသဖွငျ့ Cookie အသုံးပွုမှုကို လကျခံပါက လကျခံပါသညျ ဆိုသောခလုတျကို ကလဈနှိပျကာ ဆကျလကျ ကွညျ့ရှုနိုငျပါသညျ။ ပိုမိုသိရှိရနျ.
အကျပျမြား နှငျ့ ဝနျဆောငျမှုမြား
ရှာသညျ့ အလှာ ဖှငျ့ရနျ
ရှာရနျ အဓိကစာလုံး ရိုကျထညျ့ပါ
ပျေါနသေော အလှာမြား ပိတျရနျ
ဤထုတျကုနျကို ဖယျဖို့ သခြောပွီလား?
ဝယျခငျြသညျ့စာရငျးသို့ ရှရေ့နျ ဖကျြရနျ
SAMSUNG.COM သို့ ဆကျသှားရနျ Pageမှ ထှကျရနျ
အားလုံး Smartphones /
ဘယျမှာ ဝယျရမလဲ အခု ဝယျရနျ လှညျးသို့ ထညျ့ရနျ ဘယျမှာ ဝယျရမလဲ
Touch-based fingerprint sensor
13MP rear camera with f1.9 lens
Galaxy J ကို Galaxy A အသစ်အဖြစ် အဆင့်မြှင့်တင်ပါ။
သင်ကြိုက်နှစ်သက်တဲ့ J ရှိ အဓိကလုပ်ဆောင်ချက်အားလုံးကို ယူပြီး ပိုမိုကောင်းမွန်သော ထုတ်ကုန်အသစ်တစ်ခုအဖြစ်ဖန်တီးထားတဲ့ - Galaxy A အသစ်ဖြစ်ပါတယ်။ J အား ပြောင်းလဲတိုးတက်နေသော ခေတ်နဲ့ အညီ ဘယ်လိုတီထွင်ထားလဲဆိုတာကြည့်လိုက်ပါ။
ခံ့ညားစွာ ပြန်လည် ဆန်းသစ်ထားပါတယ်။
အံ့သြမှင်သက်ဖွယ် သတ္တုရောင်ခြယ် ဖုန်းရဲ့ကျောပြင်မှာ ကင်မရာဟာ အဖုအထစ် တစ်စုံတစ်ရာ မရှိဘဲ ချောမွေ့ပြေပြစ်နေတဲ့အတွက် အထူးကျစ်လျစ် ပါးလွှာတဲ့ ဒီဇိုင်းတစ်ခုအဖြစ် ၀ံ့ထည်မှုကို သေချာပေါက် ပေးစွမ်းနိုင်မှာပါ။ ပိုမိုကျယ်ပြန့်တဲ့ ဖုန်းရဲ့မျက်နှာပြင်နဲ့ အစွန်းတစ်ဖက်တစ်ချက်သို့တိုင် ထိတွေ့သုံးစွဲနိုင်အောင် ဖန်သားပြင်ကို ကွေးညွတ်ဖြန့်ကားပေးထားတဲ့ အတွက် အမြင်ပသာဒကို အကောင်းဆုံးပံ့ပိုးပေးမှာ ဖြစ်သလို လက်တစ်ဖက်တည်းနဲ့ သုံးစွဲတဲ့ အခါမျိုးတွေမှာလည်း သက်သောင့်သက်သာ ရှိစေမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
သင့်ရဲ့ဓာတ္ပုံတြေကို တောက်ျေပာင်နေအာင် လုပ်ဆောင္လိုက္ပါ။
အလင်းတံခါးအက်ယ် ၁ ဒသမ ၉ အထိ ဖြင့်ဟေပးနိုင္တဲ့ Lens တြေက အလင်းဓာတ်အားနည်းတဲ့ အျေခအေနမ်ိုးမွာတောင် လင်းလက်တောက္ပေစနိုင္မျွာဖစ္ပါတယ်။ 13 MP ကင္မရာက သင္ဖမ်းယူလိုက္တဲ့ ပုံရိပ်တြေကို အေသးစိတ္က်က် ၀င်းပစိုလြင်ပြီး လွပေနေစဖို့ သေခ်ာစေမျွာဖစ္ပါတယ်။
Control and capture at will
8MP ရှိတဲ့ ရှေ့ကင်မရာကို Wide Selfie လို့ ခေါ်တဲ့ Function နဲ့ တွဲသုံးရမှာ ဖြစ်တဲ့အတွက် လူဦးရေ ခပ်များများ စုရိုက်ဖို့ပဲ ဖြစ်ဖြစ်၊ လှပတဲ့ နောက်ခံမြင်ကွင်းကျယ်တွေကို ဖမ်းယူနိုင်စေဖို့ပဲ သင့်ကို အဆင်ပြေစေမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဆယ်လ်ဖီစတစ်တောင်မလိုဘဲ သင့်ရဲ့ လက်ဖ၀ါးထဲမှာ ဖုန်းကို ဆုပ်ကိုင်ထားရင် အဲဒီလိုပုံရိပ်ကောင်းတွေကို အေးအေးသာယာစွာ ရိုက်ယူနိုင်မှာလည်း ဖြစ်ပါတယ်။
တိုးမြှင့်ပေးထားတဲ့ RAM နဲ့ ROM တို့က ဆော့ဖ်ဝဲလ်တစ်ခုအတွင်း တစ်နေရာကနေ တစ်နေရာကို ကူးပြောင်းသွားလာတာတွေနဲ့ ဆော့ဖ်ဝဲလ်အစုံ တစ်ပြိုင်နက် ဖွင့်ပြီး ချောမွေ့စွာသုံးစွဲနိုင်စေမှာလည်း ဖြစ်ပါတယ်။ Smart Manager က ကိုယ့်ဟန်းဆက်တဲ့ အခြေအနေအရပ်ရပ်ကို စစ်ဆေးခြင်း၊ အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင် ထိန်းညှိပေးခြင်းတို့ ဆောင်ရွက်ပေးမှာ ဖြစ်တဲ့အတွက် သင့်ကိုအများတကာထက် ခြေခတစ်လှမ်းအမြဲ သာနေစေမှာပါ။
သင့် Device ကို သင်တစ်ယောက်တည်းသာ အသုံးပြုနိုင်ရေးအတွက် လျှင်မြန်ပြီး ဘေးကင်းလုံခြုံမှုရှိတဲ့ Solution ကို ပံ့ပိုးပေးထားပါတယ်။ သူမှပါတဲ့ လက်ဗွေရာဖတ်ရှုမှု ဆင်ဆာစနစ်က သင့် Device ကို ဘေးကင်းလုံခြုံ လျင်မြန်စွာနဲ့ Unlock လုပ်နိုင်စေမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
ရုပ်သံကြည့်ရှုနားဆင်ကြသူတြေနဲ့ Gamer တြေ အသုံျးပုရအဆင်ျေပေစေဖို့ ဘက္ထရီရဲ့ လ်ွပ္စစ္ဓာတ္ခံနိုင်ရည်အားကို ကြာရွည်အောင် လုပ်ဆောင်ပေးထားပါတယ်။ Ultra Power Saving Mode က မလိုအပ္တဲ့ လ်ွပ္စစ္ဓာတ်သုံးစြဲမှုမ်ားကို လွေ်ာ့ခ်ပေးဖို့ နောက္ခံ apps တြေကို အလိုအေလ်ာက္ပိတ်ပေးမွာလည်ျးဖစ္ပါတယ်။
CMOS 13.0MP Main Camera - Resolution
143 Weight (g)
Up to 54 Audio Playback Time (Hours)
Rear Camera - F Number f/1.9
Available Memory (GB)* 10.3 GB
Number of SIM (Single) Single-SIM
Type of SIM Slot (Single) SIM 1 + MicroSD
4G FDD LTE B1(2100), B3(1800), B5(850), B7(2600), B8(900), B28(700)
Dimension (HxWxD, mm) 142.8 x 69.5 x 8.1
Audio Playback Time (Hours) Up to 54
Talk Time (3G WCDMA) (Hours) Up to 16
*ဖုန်းထိန်းချုပ်မှု စနစ်နှင့် ဖုန်းအတွက်လိုအပ်သော Software များ ညီညွတ်ရန် သုံးစွဲရသော သိုလှောင်စနစ်ကြောင့် အသုံးပြုနိုင်သော Memory ပမာဏသည် စုစုပေါင်း Memory ပမာဏထက်နည်းသည်။ အမှန်တကယ် အသုံးပြုနိုင်သော Memory ပမာဏမှာလည်း ဖုန်းထိန်းချုပ်မှု စနစ်အပေါ်မူတည်၍ ကွဲပြားကာ Software Update လုပ်ပြီးပါကလည်း ပြောင်းလဲနိုင်ခြေရှိသည်။
Live colorful with sAMOLED display
* အဓိကအားသာချက်များသည် အဓိက Spec နှင့် ကွဲပြားမှုရှိနိုင်ပါသည်။
* ကွန်ရက် - ကိရိယာတွင်း ထည့်သွင်းထားသော ဘန်ဝစ်များသည် ဒေသအလိုက် သို့မဟုတ် ဝန်ဆောင်မှု ပံ့ပိုးသူအလိုက် မူတည်၍ ကွဲပြားနိုင်ပါသည်
Device မွ ထောက္ပံ့ပေးနိုင္တဲ့ Bandwith ပမာဏဟာ ကြန်ရက်ဝန်ဆောင္မှုပေးသူရဲ့ အျေခအေနေပါ် မ်ားစြာ မွီတည္မှုရွိပါတယ်။
လဲလှယျမှု နှငျ့ စုပေါငျး option နှဈခုလုံးကို ရှေးခယျြထားပါကနောကျထပျလဲလှယျမှု အတှကျိdiscount ပါဝငျတော့မညျမဟုတျပါ။